Baarlamaanka dowlada Puntland oo u codeeyay 11-ka xubnood ee aqalka sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka dowlada Puntland oo u codeeyay 11-ka xubnood ee aqalka sare
October 20, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Baarlamaanka dowlada Puntland. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowlada Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah u codeeyay xubnaha Puntland u matali doona aqalka sare ee dowlada federaalka Soomaaliya.
Murashaxiinta oo ku dhawaa ilaa iyo dhowr labaatan ayaa waxaa soo baxay 11-ka xubnood, kadib doorasho qaadatay saacado badan.
11-ka xubnood ee ku guulaystay cod bixinta baarlamaanka Puntland ayaa waxaa ku jira saddex haween ah.
Magacyada xubnaha aqalka saree e guulaystay:
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole)
Cabdirisaaq Xasan Cusmaan (Jurile)
Farxaan Cali Xuseen
Cabdisalaan Xaaji Maxamuud Dheere
Mahad Daahir Shiikh Nuur
Hodan Maxamuud Cusmaan
Bootaan Bare Samatar
Maxamuud Axmed Maxamuud
Siciido Xasan Cusmaan
Shukri Aadan Maxamed Camay
Waxaa xusid mudan in masuuliyiin ruugcadaa ah oo ay kamidyihiin Maxamed Siciid Xirsi (Moorgan) iyo Cali Ismaaciil Cabdi Giir, kuwaasoo la filayay in ay soo baxayaan in ay ku guuldaraysteen codka baarlamaanka musuq-maasuqa hareeyay ee Puntland.
October 16, 2016 Baarlamaanka dowlada Puntland oo iclaamiyay wakhtiga codka loo qaadayo murashaxiinta aqalka sare
July 22, 2016 Siyaasi Cabdi Shuluco oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe
Ugu yaraan 19 maleeshiyo ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray Al-Shabaab iyo dagaalyahano daacad u ah Mukhtaar Roobow
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 19 maleeshiyo ah ayaa lagu dilay dagaal maalin socday oo ka dhacay gobolka Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dagaalka ayaa dhacay shalay oo Arbaco ahayd waxaana uu dhexmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo [...]
Marwada kowaad ee Nayjeeriya oo sheegtay in Madaxweyne Buhari uusan u xanuunsanayn sida la mooday
Abuja-(Puntland Mirror) Marwada kowaad ee dalka Nayjeeriya Caasha Buhaari ayaa sheegtay in saygeeda uusan u xanuunsanayn sida dadka ay moodeen. Waxay Twitter-ka ku soo daabacday in Madaxweyne Maxamed Buhaari oo 74-sanno jir ah, uu wato [...]